ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာအသံပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်သူ Scott Harber, CAS | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတူအသံ Insight အသံကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သူ Scott Harber, CAS
အသံထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းမှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနည်းတူ Scott Harber သည်ဂီတပညာရှင်အဖြစ်သူ၏အသံပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့သည်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင် San Diego မှပန့်ခ်ရော့ခ်အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်သည်။ သူ၏နှစ် (၃၀) နီးပါးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုစဉ်ကာလအတွင်း Harber သည်တီဗွီနှင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၌လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် Borat, noctunal တိရိစ္ဆာန်များ, Smart၊ Hell's Kitchen၊ Gangster Squad၊ Wilfred ကိုရယူပါ နှင့် ရဲတိုက်, အနည်းငယ်အမည်ကိုရန်။ သူသည် Dang Me Sound ကုမ္ပဏီအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သည့်အသံကုမ္ပဏီကိုလည်းပိုင်ဆိုင်သည် Los Angeles မြို့.
မေး။ ။ လုပ်ငန်းထဲဘယ်လိုရောက်သွားတယ်၊ အခုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာပြောပြပါ။
ငါတီးဝိုင်းနှင့်အတူစတူဒီယို၌ရှိ၏နှင့်ဆန်ဖရန်စစ္စကိုပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှအသံဖမ်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာဒီဂရီရရှိခဲ့သည်စဉ်ငါဂီတမှတ်တမ်းတင်၏နည်းပညာဘက်နှင့်အတူချစ်ကြိုက်ခဲ့သည်။ ဘွဲ့ရပြီးနောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်သည်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုဖော်ပြခဲ့သည် ဟောလိဝုဒ် ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ကိုအသံရောစပ်စက်အဖြစ်နဲ့စတင်ခဲ့တယ် ကယ်ဆယ်ရေး 911။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၃၀ နီးပါးအတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့လူတချို့နဲ့အတူအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်များ၊
Last year, I finishedathree-season run on the HBO show ဘောလုံး ငါမကြာသေးခင်က Amazon Prime show အတွက် Season6ကိုပြီးအောင်လုပ်ခဲ့တယ်၊ Bosch ရဲ့။ ငါမကြာသေးမီကလည်းပြင်းထန်စွာကောင်းချီးပြပွဲအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် barry HBO အတွက်နှင့် Mohammad Ali အကြောင်း Ken Burns စီးရီးကိုရိုက်ကူးနေခြင်းဖြစ်သည်။
Q: DPA Microphones ကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ။
A: DPA ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်ဂီတမိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက်နာမည်ကြီးသည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့်သူငယ်ချင်း Simon Hayes ကသူတို့ကိုရုပ်ရှင်တွင်အသုံးပြုခဲ့သည် က Les Miserables။ အသံလွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာ transmitter တွေဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။ ၎င်းသည်အထူးမိုက်ခရိုဖုန်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်သည် DPA သို့အပြည့်အ ၀ ခုန်တက်ခဲ့သည်။ ယခုငါ 4071 lavalier mic ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုသူဖြစ်သည်။ ငါကအပေါ်ကိုအသုံးပြု။ စတင်ခဲ့သည် ရဲတိုက် about eight years ago. I also use the 4017 shotgun mics and have just started to incorporate the 4018s into my repertoire.
DPA Mics သည်အတူတကွကောင်းမွန်စွာရောနှောနေသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည် lavalier နှင့် boom mics နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ရောနှောသူရောသာမက၎င်းအရင်းအမြစ်အားလုံးကိုအတူတကွရောနှောနေရမည့်သူများအတွက်ပါကြီးမားသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ MIC ပွဲများကိုထားရှိခြင်းသည်သူတို့၏အလုပ်အပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့နှင့်အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။ မိုက်ခရိုများသည်ရှေ့တွင်စျေးကြီးနိုင်သော်လည်းရေရှည်တွင်၎င်းသည်ငွေစုဆောင်းရန်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သည်။
Q: DPA သည်အထောက်အကူပြုသောထူးခြားသည့် miking အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်ဥပမာတစ်ခုပေးပါ ဦး ။
A: Working on ဘောလုံး လူတွေဟာအဝတ်အစားအများကြီးဝတ်စရာမလိုဘူး၊ ပြန့်ပွားစက်နှင့်မိက္ခာများအတိုင်းအတာနှင့်သူတို့တပ်ဆင်ပုံသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကိုလှည့်စားနေရာတစ်ခုနှင့် DPA ၏အလုပ်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းကောင်းထားရန်လိုအပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ ဖုံးကွယ်ထားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ယေဘူယျအားဖြင့်သုံးသောအရာအားလုံးမပါဘဲတောင်ပေါ်သည်အခြားမိုက်မဲမှုများထက် ပို၍ ခွင့်လွှတ်သည်။ ထို့အပြင်အမှန်တကယ် mic head element သည်အလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည်။
Q: DPA ၏ဘက်စုံသုံးမှုကသင်၏အမျိုးမျိုးသောစီမံကိန်းများကိုဘယ်လိုကူညီခဲ့သလဲ။
ဖြေ။ ။ သရုပ်ဆောင်တွေဟာပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့လိုင်းတွေတိတ်တဆိတ်ပေးလေ့ရှိတာကလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းတိတ်ဆိတ်တဲ့အတွက်တခါတရံမှာသူတို့ကအခြားသူစကားပြောတဲ့အချိန်ကိုတောင်မသိကြဘူး။ အစဉ်မပြတ်ငါ "သူတို့ post ကိုအတူတကွဒီတည်းဖြတ်ရန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရလိမ့်မယ်။ " ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်သူတို့က DPA Mics အသံဘယ်လောက်သန့်ရှင်းနေလဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ပါပြီ။ ဒါကပြwithနာပါ၊ အခုငါတို့ mics တွေကိုအသံကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပေးရမယ်။ သင့်မှာမိုက်ခရိုကောင်းကောင်းမရှိရင်နောက်ခံဆူညံသံတွေအများကြီးလည်းကြားရလိမ့်မယ်။ မိုက်ကရိုဖုန်းတပ်ဆင်ပုံသည်အသံကိုလည်းအကျိုးသက်ရောက်သည်။ DPA တကယ်ထွန်းလင်းဘယ်မှာပါပဲ။ ဒါဟာမိုက်မဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုနိုင်ပါတယ်နှင့်အသံအဘို့ကြီးသောဖြစ်ကြသည်။
သရုပ်ဆောင်များစွာသည်ယခုအခါနူးညံ့သိမ်မွေ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အံ့သြစရာကောင်းသည့်တိုးတက်လာသောအသံများရှိသော Dwayne“ The Rock” ဂျွန်ဆင်၊ လန်းရစ်ဒစ်နှင့် Titus Welliver ကဲ့သို့သောလူများကိုလည်းမှတ်တမ်းတင်ရန်ကံကောင်းခဲ့သည်။ ကြီးစွာသောအသံပေါ်၌ကြီးစွာသော mic ကဲ့သို့ဘာမျှမရှိပါ။ သင်ရုံထိုင်လျက်အထဲကချမ်းသာလာသည်။ DPA ၏သဘာဝအရည်အသွေးအရည်အသွေးကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းဖြင့်၎င်းအခြေအနေများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ငါပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောရှိုးပွဲအတော်များများ Bosch ရဲ့မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်သည်အလွန်များပြားနေပြီး ၄၀၁၇ ကိုပယ်ချခြင်းသည်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ ကြိုတင်မိုက်ကရိုဖုန်းများ၌အလွန်ကောင်းမွန်သောအသံကိုပယ်ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသူများပင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့သည် ဦး တည်ချက်လွန်နေခြင်း (သို့) ပစ်ကပ်ပုံစံကျဉ်းမြောင်းခြင်းကြောင့်အသံသည်အရောင်လွန်းကြောင်းမကြာခဏတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ DPA ကသူ့ရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းတွေကိုအံ့သြစရာကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါထင်တာကတော့လူတိုင်းသည် DPA Mics ကိုကြီးကြီးမှသေးငယ်သောထုတ်လုပ်မှုအထိသုံးနိုင်သည်။ ငါမိုက်ကရိုဖုန်းကိုတကယ်သဘောကျမိတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ DPA mics နဲ့အချိန်ရဲ့ ၉၈ ရာခိုင်နှုန်းကို ဦး ဆောင်နေတယ်။
DPA မိုက်ကရိုဖုန်း မိုက်ခရိုဖုန်း အသံသွင်းချက် 2020-09-10
ယခင်: ကျောက်စရစ်ခဲသဲသောင်ပြင်စနစ်များသည်သမုဒ္ဒရာများကိုပြသသည် - မီဒီယာ Orchestration ၏နောက်လာမည့်လှိုင်း
နောက်တစ်ခု: Sohonet သည် ClearView Pivot Lite ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် 4K Remote ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်မှအဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်